‘Ngatichitarisai AFCON’ | Kwayedza
14 Oct, 2021 - 09:10 2021-10-14T09:49:15+00:00 2021-10-14T09:49:15+00:00 0 Views
SHASHA yakambonetsa munhabvu iri mubati wepagedhi weRio Tinto nemaWarriors — Raphael Phiri — inoti yave nguva yekutanga kuvaka chikwata chakasimba chichanomirira nyika kumutambo weAfrica Cup of Nations (AFCON) kuCameroon gore rinotevera.
Zvichitevera kukundwa kwakaitwa maWarriors neGhana mumitambo miviri yadarika, inoti 3-1 kuGhana ne1-0 muno nemusi weChipiri, mukana wemaWarriors wekuramba vachirwira kuenda kuQatar World Cup wakabva wapera.
Chikwata chenyika ichi pari zvino changokwanisa kuwana chibodzwa chimwechete kubva mumitambo mina zvekuti kunyangwe chikahwina mitambo miviri yasara, hapana zvazvichashandura.
Muhurukuro neKwayedza, Phiri anoti murairidzi wemaWarriors — Norman Mapeza — anofanirwa kushandisa mitambo miviri yasara yechikwata chake muboka reGroup G, iyo ichatambwa munaMbudzi, neSouth Africa uye neEthiopia kugadzirira kuenda kuCameroon.
“Isu senyika zvekufunga kuenda kuWorld Cup zvichiri kure nesu nekuti hatisati tambotora mikombe mikuru yakaita seAFCON asi tinofunga zvekuenda kuWorld Cup.
“Ngatitange tambotsviriridza muno muAfrica nekunetsa kuAFCON pamwe nekukunda zvikwata zvikuru zvakaita seGhana, ndiko kuti tigotange kufunga zveWorld Cup nekuti uko kunoenda shasha. Taenda kuAFCON kakawanda chaizvo asi hapana zvatamboita zvinobatika taenda ikoko.
“Kazhinji tinogara tichingochema-chema tichiti hatiwane mitambo yehushamwari yekugadzirira, miviri yasara ngatiishandise kuita gadziriro dzedu nekuvaka chikwata chedu,” anodaro Phiri.
Jimmy Cliff, sezita raPhiri remadunhurirwa iro aizivikanwa naro munhabvu, anoti zvakakosha kuti chikwata chemaWarrioirs chivakwe patsva chiine vatambi vechidiki.
Anoti vatambi vakaita saBrendan Galloway naJordan Zemura vachiri vadiki uye remangwana ravo rakajeka.
“Tine vatambi vakawanda vechidiki, ngavashevedzwe chikwata chemaWarriors chovakwa kubva pavatambi ava. Ngatisangorambe tichingoshevedza madhara chete nekuti vapera, pave kudiwa vechidiki kuti vatakure chikwata ichi kuenda mberi,” anodaro Phiri.
Kubva asendeka shangu dzenhabvu, Phiri ave kuita basa rekurairidza mutambo uyu izvo zvakamuona achirairidza zvikwata zvinosanganisira Golden Valley iyo yaikwikwidza muDivision One.
Pari zvino akavamba chikwata chake cheEiffel Flats United icho chiri kukwikwidza muDivision Two.
Zvakadaro, sachigaro wesangano reFriends of the Warriors – Edward Chimedza – anotsinhira mashoko aPhiri achiti maWarriors anofanirwa kushandisa mitambo miviri yasara kuvaka chikwata chichaenda kuAFCON.
“Yave nguva yekutanga gadziriro dzekuenda kuAFCON, mitambo miviri yasara ngaishandiswe kuvaka chikwata chedu chakasimba.
“Zifa ngaipe Norman Mapeza rutsigiro rwose kuti avake chikwata chake chakasimba. Iye zvino haisi nguva yekungoshandura-shandura varairidzi pose pose, tinoda kuti pave nemurairidzi wavanopa kana kondirakiti yemakore mashanu anyatsoshanda kuvaka chikwata chakasimba chaicho,” anodaro Chimedza.